UCAROLE KING: UKUPHONONONGWA KWEALBHAMU YETAPESTRY - IINDABA
NgeCawa nganye, uPitchfork ujonga ngokujulile kwi-albhamu ebalulekileyo evela kwixesha elidlulileyo, kwaye nayiphi na irekhodi engekho koovimba bethu iyafaneleka. Namhlanje, siphinda siqwalasele uCarole King Ikhonkco , isenzo sesibini esiguqula umbhali weengoma ukuba abe ligorha lomculo.
UCarole King wayengumdlali wepiyano oneminyaka eli-15 ubudala kwisiketi esimdaka xa wayeqala ukuthatha ilifti ukuya kwiofisi yeManhattan yeleyibhile enesitayile somculo kunye nokuqina kwakhe kwe-Big Apple, kwaye wacela ukuphicotha iingoma zakhe. Kwakungo 1957. Njengomntu okwishumi elivisayo waseBrooklyn, intombi yomfundisi wepiyano kunye nomcimi-mlilo owahlukana esemncinci, u-King wayenesihlalo esingaphambili kumnombo we rock'n'roll. Wayezibuza ukuba angaba yinxalenye yawo na.
Ulumke kakhulu ukuba angathathwa njengopholileyo, ezimisele kakhulu ukukhathalela, uKing uza kutyikitya isivumelwano sakhe sokuqala kunye neABC-Paramount kwakuloo nyaka. Wayengumama otshatileyo wababini eneminyaka engama-20, ehlala edolophini eNew Jersey kunye nomyeni wakhe kunye nomculo weengoma, uGerry Goffin, umntu ohlakaniphileyo owadibana naye eQueens College kwaye wangena kumculo. Njengokuba babebhala ngokubodwa iinkwenkwezi ukuba zicule kwi-stratosphere -Eva encinci Isindululo seLoco , iiShirelles ’ Ngaba Uyandithanda Ngomso , kunye noAretha Franklin (Undenza Ndive ngathi) Umfazi weNdalo phakathi kwabo — ubomi bukaKing buqu babungumthombo wembono. Yena noGoffin basebenza kwigunjana elinepiyano ethe nkqo kunye nomqwebedu womlotha ophuphuma kwinkampani yokupapasha iAldon Music, eyinyani yomzi mveliso wepop ngaphesheya kweBrill Building. UKumkani uphawule ii-AM zabo I-mini-masterpieces eneengoma ze-R & B zobutsha bakhe kwaye wazikhanyisa ngobuqaqawuli besithandwa sakhe uRodgers kunye noHammerstein. Uninzi lwenziwa kubusuku obubodwa ngelixa abantwana bakhe belele.
Ukuba konke oko wakwenzayo, ngesele ebengumlandeli. Yayiyile migangatho ye pop eyakhokelela uJohn Lennon ukuba aphawule ukuba, xa yena noPaul McCartney bahlangana okokuqala, bafuna ukuba yi-Goffin-King yaseNgilane. Yayiziingoma ezazinikwe uRandy Newman kwifom yedemo njengemizekelo yokubhala ngokugqibeleleyo (ubize uKumkani ukuba abe ligorha lakhe), kwaye loo nto yenza ukuba uJames Taylor abe novalo lokuthetha naye ngobusuku abadibana nabo. Kodwa yayisisenzo sokuqala.
Ikhonkco yayiyicwecwe lesibini likaKing njengebhodi ephatha iingoma, umbhali wengoma oyintloko, imvumi engafakwanga varnish, kunye nomculi orekhodayo oziqhelileyo-inkosi yase Melika yengoma ekwaqala ukuba yinto ebalulekileyo. Kwiminyaka engama-29, ebekwishishini lomculo ngaphezulu kweshumi leminyaka, eguqula ulwandle ukuba lushiye umculo we-bubblegum aye kumculi-umbhali wengoma. Wayengathandabuzeki ngenkwenkwezi. (Khange ndizicinge njengemvumi, utshilo uKing, kwaye ebhalele uAretha, ngubani onokumgxeka?) Uye waqhawula nomculo wakhe weengoma. Ukuqokelela iintombi zakhe, uLouise noSherry, kunye nekati yakhe, iTelemachus, uKing wafudukela kwilizwe laseHollywood Hills, apho wenza khona isithethe somculo we pop-wokuzihlaziya ngokwendlela yokuzifumanisa. Ekuhambeni kwexesha, wakhula ngokomoya, waba ngumlandeli weSwami Satchidananda oyintanda kwezobugcisa. Ngokubalulekileyo, ekugqibeleni waqala ukubhala amazwi akhe ngokunyanisekileyo, ebhala ngaphezulu kwesiqingatha seengoma, kunye nazo zonke iincopho, Ikhonkco ndedwa.
Iingoma zikaKumkani zibubungqina kumabinzana alula xa ephakanyiswe lilungiselelo elingagungqiyo kunye nenyaniso engafakwanga, inkcazo yeklasikhi. Umhle, unetshomi, ukude kakhulu-amazwi akhe ayancokola, ezoqoqosho, kwaye phantse abe ngumnxeba, ngokungathi ufunda ingqondo yethu xa sisonke. Kwiingoma ezixuba ukulangazelela iqela lamantombazana, iBroadway balladeering, iblues, umphefumlo, kunye nokuzibuza, Ikhonkco wasebenzisa igumbi ngokwalo njengesixhobo. Umvelisi, umvakalisi wexesha elide u-King u-Lou Adler, wayefuna ukuba ivakala njenge-demos engaphantsi kwaye efunwayo awayeyirekhoda xa ebhalela amanye amagcisa, kunye nokusondelelana komfazi kwipiyano ecula ngqo kuwe. Iziphumo zazichanekile kodwa zazingacacanga kakhulu. Ngenxa yokomoya wakhe omtsha, kukho ukuzola okumnandi Ikhonkco . Nantsi ke 'i-rock'n'roller yama-50s yaseBrooklyn ihambile kwiminyaka yee-60s ukuba ibeyinenekazi lama-70s laseCanyon, lisenza umculo owawubonakala ungaphumeleli ngokupheleleyo.
Phakathi kokuhlala kukho isiqhumiso kunye namakhandlela, uKumkani wabhala Ikhonkco kwii-A & M Studios eHollywood, kwiStudio B. Abachweli bebeseStudio A-bebezokurekhoda iKing’s It Go to Take Some Time kunyaka olandelayo- nakwiStudio C, uJoni Mitchell wayesebenza kubugcisa bakhe bokuvuma izono, Luhlaza . Ibhendi kaKing yayiza kungena kwisitudiyo sikaMitchell xa wayengekho (ipiyano engcono apho), kwaye uMitchell wayeza kuza kucula amazwi axhasayo, ecaleni kukaJames Taylor, kwi Ikhonkco ukurekhodwa kwethi Unomhlobo kwaye uya kundithanda ngomso? Ngokwengxelo kaSheila Weller yexesha, Amantombazana afana nathi , UMitchell wayesaziwa ngokuba uza kundithanda Ngomso? ingoma yakhe ayithandayo ngalo lonke ixesha.
Iingoma ze Ikhonkco bafana namaqabane okuhamba kumathandabuzo kunye nokudana kobomi bemihla ngemihla ngesidima. Emva kokuqamba amakhulu abantu abangatshatanga, uKing wayeyazi into abayifunayo: imvakalelo eluhlaza, imingxunya ngononophelo, ukubengezela kancinci. Uvumela ilizwi lakhe liphuke ukubonisa ukuba liyaphila. Umphefumlo uphelelwe lixesha-ubhalelwe kunye noToni Stern, owayengumbhali weengoma ngeloxesha owathi uKumkani wabiza intombazana yaseCalifornia eyomeleleyo-uziva ngathi ngumhobe-ntombazana weqela labantu abadala, apho elona candelo lokwahlukana kukuthi, kuvela, ukucaca. Amagama axhasayo e-Way Way Yonder, aculwa ngu-Merry Clayton, ahlawulisa ukuzola kwawo, aphuphe ngoxolo lwengqondo kunye negadi yobulumko. Ngo-1971, uKumkani wayengagcini ngokwenza i-yoga kodwa eyifundisa kwiZiko eliHlanganisiweyo leYoga, kunye nomlindi wokuqokelela Ikhonkco . I-Broadway-ready Beautiful, eza kuKumkani ngelixa yayiqhuba umgaqo ongaphantsi, kukucamngca ngobubele bothando okuxhonywe kwiokhestra efana ne-Gershwin yeqela lomculo wepiyano: isibheno kwihlabathi ukuba likhethe umbono oqinisekileyo, ukubeka oko ukuko ' d ndiyakuthanda ukufumana.
Njengoko uKumkani wasebenzisa ixesha lakhe lokwakha iBrill kwi-bohemianism entsha, mhlawumbi yayinzima imeko yoNxweme lwaseMpuma egcina amazwi akhe ekhonkrithi kunye nesandi sakhe. Ubovu Ikhonkco evulekileyo Ndiva uMhlaba ushukuma bobabini bubungqina bokuba uKing usemhlabeni kunye nokuzwana kwakhe ngokweemvakalelo. Iphefumlelwe ngenxalenye yinoveli kaErnest Hemingway KuBell ihlawula ntoni -Abalinganiswa benza uthando ehlathini kwaye baziva umhlaba ushenxa kwaye ushiya phantsi kwabo-wabhala ingoma kwasekuqaleni kuka-731. Ngomhla wokuzalwa kwakhe, ngoFebruwari 9, inyikima eyenzakalisayo eSan Fernando yenzekile. Ndiva umhlaba ushukuma phantsi kweenyawo zam / ndisiva isibhakabhaka siwela ezantsi, uKing ucula nge-bluesy swagger, ehambisa amandla etectonic of infatuation.
Ngaphambi Ikhonkco U-King waseka iqela lomculo werock elalibizwa ngokuba sisiXeko kwigumbi lakhe lokuhlala uLaurel Canyon nabanye abantu abatshintshileyo eNew York, uDanny Kortchmar noCharles Larkey (owayeza kuba ngumyeni wakhe wesibini). Bakhupha icwecwe elinye elimnandi, lango-1968 Ngoku yonke into sele ithethiwe ; Ingoma yesihloko, ebhalwe ngokudibeneyo neStern, yinto entle yokuncamisa. Ngokumangalisayo, uKortchmar kunye noLarkey babengamalungu e-Fugs: i-East Village yabetha-punk antagonists ogama labo lokulwa nobuchwephesha lwalungaphezulu okanye ngaphantsi ukuguqulwa ngokupheleleyo kwezinto onokucinga ngazo xa ucinga ngoCarole King. Kodwa kwimemori yakhe, u-King ubhala ukuba abo basebenzisana naye batyhiliza ukucula ngaphaya kwento ababekholelwa ukuba kukuphela kobuchule babo. Unokuva ukuba uKumkani uhlala elukhulisa njani uluhlu lwakhe olunomda, ukufikelela kwinto engaphaya kwakhe. Wawubiza umculo wakhe njengelitye elithambileyo, kodwa isandi sokucula kwakhe sivakala ngokungxolayo ngabom. Ngomculo othandekayo weKhaya kwakhona, i-lyric kaKing ithatha imvakalelo echanekileyo yokuzama ukubakho xa kungenakwenzeka: Ikhephu liyabanda / Imvula imanzi / Iyothusa umphefumlo wam kumongo / andizukuvuya ndide ndikubone wedwa kwakhona . Ilizwi likaKing licinezela ngokuchasene ne-lyric-umongo-ngevolumu engapheliyo, amandla, kwaye uyenza ukuba ibeyinyani ngokwenyani: eyona ndawo ikude inqaku elinokuya kuyo.
UKumkani wayehlala ebhalela abanye iingoma. Ngelo xesha, wayekhenketha kwiqela likaJames Taylor; wayedlala ipiyano kwiibhaladi ezibuthathaka, ezikhanyayo ze1970's Umntwana olungileyo uJames . Kwaye nangona Ikhonkco Iincopho-Kude lee kwaye Unomhlobo-zazingabhaliswanga ngobuchwephesha zikaTaylor, wathi wazibhala enesandi sokuva kwelanga engqondweni. Ukuza kuthi ga ngoku weza kuye endleleni ngelixa wayemkhumbula umyeni wakhe ngelo xesha, owayesakuba ngu-Fug Charles Larkey. Ingoma yokugqibela yerekhodi, isimangaliso esibonakala ngathi siyilelwe ukwenza intliziyo yakho ibaleke: iimvakalelo zokuba lilolo, ukudlula, kunye nokulangazelela umgama omde (ubomi kukhenketho, oko kukuthi) zikho kuyo yonke imincili. Ukuza kuthi ga ngoku / Ngaba akusekho mntu uhlala endaweni enye kwakhona? UKumkani uyacula, isilayidi nganye kwindawo yophando. Ukungabikho kwemida yokwakhiwa kweKing kwenza ukuba le meko ye-liminal izive ingenasiphelo-ngokungathi ikrakra ngokwayo yayisisitshixo.
Zimbalwa izithembiso kwimbali yomculo wep pop onesisa okanye ophakanyisiweyo njengoko Unomhlobo. Akulungile ukwazi ukuba unomhlobo / Xa abantu benokubanda kakhulu? UKumkani uhlabelela, enika ubunzima kuwo onke amanqaku, ngokungathi ukubuza: Yintoni ebaluleke ngakumbi? Ingoma ebonakala ngathi ijonge kuwe, nokuba ungubani na, kwaye uqinisekisa eyona nto iphambili pop: ukufikelela nje. Unaye uMhlobo waba ngu-1 owabetha u-Taylor xa erekhodisha ingxelo yakhe engokwesini kwirekhodi lakhe lowe-1971, Isilayidi sodaka Slim kunye neBlue Horizon , apho uKumkani wadlala khona. (Wayesoloko esithi uziva berekhoda icwecwe elinye eliqhubekayo, besabelana ngeemvumi ezininzi.) UTaylor kudala waphefumlelwa nguKumkani, kwaye kamva, yayinguye owakhuthaza uKing ukuba acule iingoma zakhe. Yenza ukuba ube noMhlobo i-ode egqibeleleyo kubuhlobo, unxibelelwano, kunye nokukhuthazana. Ukuthabathela phezulu kukaKumkani kwandisa ithemba layo phantse kukukhwaza.
U-King uphinde wabhala ezimbini kunye nemigangatho ka Goffin Ikhonkco —Ngaba Uyandithanda Ngomso? kunye noMfazi weNdalo-kwaye ngexa wawungenako ukubiza iinguqulelo zakhe ngokuchanekileyo, baphethe amandla bespoke awomfazi obala nembali yakhe ngengoma. Kwenye, zazizincwadana zomtshato wakhe. Ngaba Uya Kundithanda Ngomso? yayinguye noGoffin bokuqala ukubetha, kwiiShirelles, ingoma eyabenza ababhali abasisigxina emva kokuba uGoffin ekugqibeleni eyekile umsebenzi wakhe wosuku njengekhemesti. Umfazi wendalo wayekugqibela kwabo ngaphambi kokuqhawula umtshato. Kwimidlalo yesibini yomculo, amagcisa amaninzi azama ukwahlulahlula phakathi kwawo. Kodwa uKumkani wayenokudlulileyo.
Wayeneminyaka eli-19 xa uya kundithanda ngomso? kuqala ukuphuma; Ubhale umculo, walungisa imitya esebenzisa incwadi kwiokhestra ebolekwe kwilayibrari yoluntu, kwaye wadlala ipiyano kwirekhodi. Ingoma yayiyindlela yokuphendula kwi-Shirelles yangaphambilini, iTonight's the Night, kodwa yajika yaya ecaleni kwaye ijonge ezantsi, utshilo uKing. Kwi-1960, yayi-radical: ilizwi lentombazana enamehlo acacileyo yamkela ithuba lokuma kobusuku obunye-ndingayikholelwa imilingo ekukrokreni kwakho? -Kukuba wayenqwenela uthando lokwenene, warhoxa kodwa akakhohliswa. Yaba yeyokuqala yokuqala ye-1 yeqela lamantombazana. U-King no-Goffin babezidla ngale ngoma kangangokuba bangena ngobunono emnyango wekhaya labo kwidolophu yase-New Jersey ukuze badlale umlobothi walo ngalo lonke ixesha kufika undwendwe. Kodwa mhlawumbi yayisisilumkiso kwimitshato yabo egwetyiweyo. Vula Ikhonkco , Ngaba Uyakundithanda Ngomso? Yayingumfuziselo oluhlaza weminyaka yobutsha kaKing, kwaye wayeyicula ngamanyathelo ngononophelo, ngokungathi uyayikhumbula imemori kwinqaku ngalinye.
U-King no-Goffin babhale u-Aretha wabo ongatshatanga emva kokuba u-Atlantic Wexler ebanyusele kubo ngelixa ehamba ku-Broadway, waqengqa ifestile ye-limo yakhe, wabacela ukuba bamenzele igama ngesihloko esithi nguMfazi weNdalo. Bahamba ngemoto bagoduka baya eNew Jersey, bamamela i-R & B kunye neendaba ezilungileyo kwi-WNJR emnyama, kwaye bathululela isiqwenga sembali: Xa umphefumlo wam wawulahlekile kwaye ufumanekile / Wena weza kuwubanga. Ewe uMfazi weNdalo kaKumkani akabizi izulu ngala mandla mabeze nomhlaba njenge-Queen of Soul's version, eyakhutshwa ngo-1967. Xa uKumkani wayenza bukhoma kuhambo kunye noTaylor kwiminyaka emithathu kamva, wayeza kucela abaphulaphuli ukuba bacinge njengokuba kwakunjalo-idemo ka-Aretha, kunye nenxalenye yebali lobomi bakhe. Kodwa ukubamba kukaKumkani wenza umyalezo kunye nokubhabha kwakhe uziva ehlawuliswa ngamandla omntu ozama ukuzijika ngaphakathi. Kwilizwi lika-Aretha, uMfazi weNdalo luzuko. Kwilizwi likaKumkani, kunjalo, njengazo zonke Ikhonkco , isenzo esiqinisekileyo.
Nangona kunconyelwa nguKumkani ngokwakhe, Ikhonkco uchithe iiveki ezili-15 njenge-albhamu engu-1 e-U.S. xa ikhutshwa, kwaye yahlala kwiitshathi iminyaka emihlanu. UKumkani uphumelele iGrammys ezine Ikhonkco ngo-1972, ngaphezu kwakhe nawuphi na umntu owakha wamfumana ngaxeshanye, kwaye yayilixesha lokuqala ukuba umsitho wokunikezelwa kwamabhaso eNew York usasazwe ngqo kumabonakude. Kodwa uKing khange aye ekuqokeleleni amabhaso ngokwakhe. Ukhethe ukuhlala eCarlifonia kunye nomntwana wakhe wesithathu, uMolly, endaweni yoko.
Iyatsho: Kukho amandla oomama angenakuphikiswa Ikhonkco . Kuwo wonke umsebenzi kaKing, ukhumbule amaxesha xa uxanduva lakhe luhlanganisiwe, apho wayeza kuba nomntwana wakhe kwindawo yokudlala kwisitudiyo okanye ancancise phakathi. UToni Stern utshilo, ngelixa ebhalela Ikhonkco U-King uya kudlala i-bass ngesandla sakhe sasekhohlo kwaye ajike usana ngasekunene. UKumkani ngokwakhe wathi ukuba nabantwana kumgcina enesiseko sokwenyani, esivakalayo kuwo onke amanqaku alungelelanisiweyo Ikhonkco . Impumelelo yakhe elandelayo yobugcisa yayiyingqokelela yomculo wabantwana, yoo-1975 Ngokwenene uRosie Ngokusebenzisana nombhali uMaurice Sendak. Ukuphinda usebenze apho ukhokelela khona-kubhalwe ngokutsha, uKing utshilo, ukuvakala ngathi akathobeli-yaba yingoma yomxholo kumama-oyintombazana waseGilmore Girls, eyaculwa nguKing kunye nentombi yakhe uLouise.
Ndandikwishumi elivisayo xa umama wam-ephawula ukuba ndinomdla wokuhlala ndizivalele kwigumbi lam lokulala noMitchell noBob Dylan ngokungapheliyo-wandinika ikopi yakhe ye-CD Ikhonkco . Ndimele ndivume, nge-17, andiyifumenanga. Mhlawumbi ndisiva ukuba uMhlaba ushukuma uvakala uqhelekile kwindlela yam yokuziva ndinomsindo kunye nokuphefumla emoyeni, nto leyo imbi kakhulu. Ndingathanda ukucinga ngenye indawo apho Ikhonkco yaphakamisa iimvakalelo zam ezikwishumi elivisayo, ilizwi likaKing lisitsho umhle kwaye Unomhlobo ngokucacileyo. Kodwa ngeerekhodi kuhlala kukho amathuba yesibini. Kusenokwenzeka ukudlala Ikhonkco kwaye uzive ukuba kukho umntu okujongileyo.
Ngokungafaniyo noDylan okanye uMitchell, iingoma zikaKing aziskenisi ngokukhawuleza njengezopolitiko okanye imibongo, kwaye nini Ikhonkco yaphuma, irekhodi lagxekwa ngabanye njengobunzima. Ekuvukeni kombutho wamalungelo oluntu naphakathi kwenkululeko yabasetyhini, u-1971 yayingunyaka apho uMarvin Gaye wacula i-What's Going On kwaye uHelen Reddy wabhengeza ukuba ndingumfazi / ndive ndigquma.
Kodwa kwakungekho nto ikhanyayo malunga nomfazi owafika ebudaleni kwiminyaka ye-50 yokulawula ikamva lakhe, ekwakheni nasekulungiseni ubukho bakhe ngokuthanda kwakhe, ekhetha ubomi bobabini ekhaya kunye nokuzonwabisa, ngentliziyo nengqondo, nokubalisa izihlwele zakhe, amava akhe, ngengoma eyaziwayo. Ukuba uziva ulula, yinto entle leyo; ukuba siziva sithuthuzela, sisipho eso. Kuko konke ukuphupha kolutsha kwezi ngoma zakuqala zikaGoffin-King, akukho nto imnandi Ikhonkco : Bubomi benene.
ithuba lam lil baby
Ngena kwi-creepin on
eyona microphone yokurekhoda
Intyatyambo ye-lotom ye-thom yorke
Intlungu kunye neengoma ze-lil wayne